नेपालमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालनमा आउँदै | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेपालमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालनमा आउँदै
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १८:०० लगानी
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । हालसम्म नेपालमा बन्दमुखी सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) योजनाहरु मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुलामुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई सोमवार स्वीकृति प्रदान गरेको छ । क्यापिटलले एनआईबिएल सहभागीता फण्ड सञ्चालनका लागि रू. ५० करोड बराबरको ५ करोड कित्ता इकाई विक्रीको अनुमति पाएको हो ।
लगानीकर्ताहरुले प्रतिइकाई रू. १० का दरले यो इकाई खरीद गर्न पाउनेछन् । हाल नेपालमा १३ बन्दमुखी म्युचुअल फण्डहरुमात्र सञ्चानमा रहेका छन् भने नबिल ब्यालेन्स फण्डले पनि इकाई विक्री गरिरहेको छ । यसपश्चात बन्दमुखी योजनाका १४ म्युचुअल फण्डहरु हुनेछन् ।
धितोपत्र बोर्डले खुलामुखी म्युचुअल फण्डहरुलाई पनि धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने रणनीति बमोजिम एनआईबिएल एस क्यापिटलाई अनुमति प्रदान गरेको बताएको छ । यस फण्ड सञ्चालनको तयारी स्वरुप बोर्डको निर्देशनमा क्यापिटलले समेत राफसाफ विधि, खुद सम्पत्ति मूल्य गणना विधि, खरीद विक्री प्रक्रिया लगाएतको विधि प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिईसकेको जानकारी दिएको छ ।
खुलामुखी म्युचुअल योजना के हो ?
योजनाबाट संकलन गरिने रकमको मात्र तथा समय सीमा नतोकि कुनै पनि समयमा लगानीकताहरुलाई इकाईहरु विक्री गर्न सकिने गरी जारी गरिने सामूहिक लगानी योजनालाई खुलामुखी योजना भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस प्रकारको योजनामा व्यवस्थापकले जति पनि संख्यामा योजना इकाईहरु विक्री गर्न सक्नेछन् भने लगानीकर्ताहरुले विक्री गर्न आएमा पुनः खरीद पनि गरिदिन सक्छन् । यस प्रकारको योजनामा तरलता बढी हुन्छ । खुलामुखी योजना धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने भएकाले दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैन ।